माधव नेपालनै विभाजनकै सुत्रधार - Muldhar Post
गाैरी ओली २०७८, १४ जेष्ठ शुक्रबार 437 पटक हेरिएको
गाैरी ओली-माधब नेपाल मेरो राजनीतिको बाल्यकालदेखि नै मैले सुन्दै आएको नाम थियो । २०५४ मा भएको पार्टीको छैटौं राष्ट्रिय महादिवेशन पछि त मैले भौतिक रुपमा नै उहाँलाई देखेको थिए । त्यति बेलादेखि हालसम्म मैले चिनेको र बुझेको माधब कमरेडको थोरै चर्चा गर्न चाहान्छु । सुरुमा मनमोहन अधिकारी र जन–नेता मदन भण्डारीको निष्ठा योग्यता र क्षमताले विशाल बनाएको पार्टी २०५४ मा जब माधब कमरेड नेतृत्वमा आउनुभयो । तब दुई टुक्रामा बिभाजित हुन पुग्यो ।
हाल केपी ओलीले हामीलाई लखेट्यो, पार्टी फुटायो आदि भनेर कोलो–होल गर्ने माकुने कमरेडले त्यतिखेर आफु नेतृत्वमा हुदाँ पार्टी किन फुटाउनुभो ? अर्थात पार्टी फुटाएर जाने साथीहरुलाई किन रोक्न सक्नु भएन ? “मनमोहनको पालामा ९० सिट ल्याएर सबैभन्दा ठूलो भएको पार्टी माकुने कमरेडको पालामा ७० सिटमा सिमित हुन पुग्यो । पार्टी फुटाएर चोक्टै चोक्टा खान गएका बामदेव कमरेड पनि चुनावमा जिरो सिटसहित झोलमा नराम्रो संग चुर्लुम्म डुबेपछी पुनः एमाले मै आत्म समर्पण गर्न आइपुग्नुभो । मैले सुनेको बामदेव कमरेड पार्टीमा फर्किएपछि पुनः झलनाथ र बामदेव कमरेड मिलेर माधब कमरेडलाई नेतृत्वबाटै हटाउन तयार भएपछि उहाँको पछाडी सतिसाल झै उभिएर केपी कमरेडले जोगाउनु भएको थियो रे ।”
“कमरेड केपीको नेतृत्वमा हामी भने माधबको कुर्सी बचाउन लडीरह्यौ । केपीले अड्याइ नै रहनुभएको थियो तर झलनाथ कमरेडहरुको बिरोधको अघि उहाँ टिक्न सक्नुभएन, उहाँले खुट्टा छोडिदिनुभो र पदबाट राजीनामा दिनुभो । पुनः २०७१ मा पार्टीको नबाँै महादिवेशन भयो । राजनीतिक जीवनकालकोे यत्रो लामो समयसम्म नेतृत्व लिन नपाएको मान्छे कमरेड केपीको त उम्मेदवारी दिने हंक नै थियो त्यसैले उहाँले उम्मेदवारी दिनुभो । तर १५÷१५ वर्ष खाएर पनि मादब कमरेड अझै अघाउनु भएन । फेरि फर्किएर कमरेड केपीका विरुद्ध उम्मेदवारी दिन आइपुग्नु भयो । केपी कमरेड त्यतिखेर असाध्यै बिरामी हुनुहुन्थ्यो । मानवताको थोरै पनि अंश बाकी नराखेर माधब कमरेडको टिमले केपी कमरेडको स्वास्थ्यलाई जोडेर हदैसम्मका कुप्रचारहरु गर्नुभो ।
कसैले बिदेशबाट बाकसमा आउँछ भन्नुभो । कसैले चार महिनामा मर्नेलाई जिताएर के गर्नुहुन्छ भन्नुभो । कसैले यस्ता रोगिले पार्टी कसरी चलाउछ भन्नुभो । कति हुन कति गालीका डङ्गुरहरु, ती गालीहरु सम्झिएपछी अहिले पनि जिउ सिरिङ्ङ हुन्छ र मन चसक्क घोच्छ । यसपटक जसरी पनि केपी कमरेडलाई जिताएर मात्र फर्किने अठोटका साथ देशैभरीबाट प्रतिनिधिहरु आएको हुँदा उहाँहरुले जति नै हर्कत गरेपनी केही काम लागेन आखिर केपी कमरेडले जितेरै छोड्नुभो । त्यतिबेला चुनाब हारेको कुण्ठा पालेर मरिच चाउरिए झैं चाउरिएर बसेका माधब कमरेडलाई पार्टी एकता पछि प्रचण्ड कमरेड ठाक्रो भैदिनुभो ।”
“२०७४ फाल्गुन ३ गते जब केपी कमरेड प्रधानमन्त्री बन्नुभो उहाँको मन झन जलन भयो । त्यो झलनलाई उहाँले सरकार गठन भएको सात महिनामै “मेरो देश डुब्न लाग्यो, लौन कोहि माझी आउ बचाइद्यौ“ भन्ने कबितात्मक अभिव्यक्ति सहित व्यक्त गर्नुभो । त्यसपछि उहाँ निरन्तर सरकारको बिरोधमा लाग्नुभो । इतिहासमा पहिलो पटक राष्ट्रियता र समृद्धिको पक्षमा यति धेरै ऐतिहासिक काम गर्ने आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्षलाई खुइल्याउन कमरेड प्रचण्डको पाइण्टको फेर समाउँदै उहाँ सधैं लागिरहनु भयो । आफ्नै प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध कहिल्यै प्रचण्डको नामबाट १९ बुदे आरोप पत्र अघि सार्नुभो त कहिले सडकबाटै चार–चार पटक अध्यक्षबाट निकालेको घोषणा गर्नुभो । कहिल्यै हामी यहाँ छौ भनेर सडकमा बस्न जानुभो त कहिल्यै होटेल होटेलमा गुटका भेलाहरु गर्नुभो ।
कहिले बिरोध जुलुसका नाममा माखे साङ्लो बनाउनुभो त कहिले देशभरीका सोझा–साझा जनतालाई झुक्याएर गाडीमा हुल्दै काठमाण्डौ पुर्याउनुभो । कहिले राम कुमारी झाक्री जस्ता लठैतहरुलाई उचालेर प्रधानमन्त्रीको हुर्मत लिने काम गर्नुभो त कहिले भिम रावल जस्ता पदलोलुपहरुलाई संसदमा आफ्नै प्रधानमन्त्रीलाई त कुन पार्टीको प्रधानमन्त्री होस भनेर सोध्न लागाउनुभो । बास सडक,सदन, घर जताततै र खादा सुद्दा उट्दा जहिले सुकै केपी ओलीलाई मात्र गाली बेइज्जत र हुर्मत लिने काम गर्नुभो । यसो हेर्दा लाग्थ्यो होन हो उहाँहरुलाई केपी ओलीकै भुत लागेको छ ।”
“फाल्गुन २८ मा पुनःस्थापित एमालेको बैठक राख्दा कमरेड केपीले माधब कमरेडहरु सबैलाई बोलाउनुभएको थियो, तर माधब कमरेडहरु यता आउनुको साटो पेरिसडाडा गएर प्रचण्डसंग बछोडका आँसु झारेर रुन थाल्नुभयो । आफु बैठकमा नआउने तर बैठकले गरेका निर्णयहरुप्रती असहमति राख्ने । बैठकले महादिबेशन आयोजक कमिटी बनायो । आजसम्मको प्रचनमा आयोजक कमिटीमा अध्यक्ष र महासचिव बाहेक अरु सबै सदस्यहरु मात्र हुन्छन्, त्यही कुरो उक्त बैठकले गरेको थियो । त्यो कुरा माधब कमरेड नमान्ने । आफ्नो राजनीति जीवनलाई अनुसाशनको नामामा कति नेता कार्यकर्तामाथी डन्डा बर्साउनुभएको छ, कतिको राजनीतिक भविष्य पुरै निलीदिनुभएको छ उहाँले । आफु त्यसो गर्ने तर आफुले पार्टी र नेतृत्व विरुद्ध गरेको जस्तोसुकै अपराधलाई पनि माफी दिनुपर्ने र बरु पुरस्कृत नै गर्नुपर्ने रे । उहाँले पार्टी र नेतृत्व बिरुद्ध गरेको अपराधलाई अपराध भन्न नपाइने ।
एक पछि अर्को गर्दै श्रृङ्खलाबद्ध रुपमा गरेका उहाहरुका अपराधहरु माफी योग्य थिएनन् तरपनि आदरणीय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तपाईका सबै अपराधहरूलाई म माफी मिनाहा गरिदिन्छु ल आउनुस् मिलेर पार्टी चलाउ, पार्टी राम्रो बनाउ भन्दा उल्टै ठुला कुरा गरेर समानान्तर कमिटी बनाउनतिर लाग्ने । जनसंगठन र पार्टीका समानान्तर भेलाहरु गर्ने । सिङ्गो विश्वले सुन्नेगरी आफ्नो नेताको हुर्मत लिने ! विभिन्न अराजक र निच ब्यक्तिहरुबाट देशको सर्बोच्च संस्था सम्माननिय राष्ट्रपति माथी गालीगलौच गर्ने र चरित्र हत्या गर्ने आदि अपराधहरु उहाहरुले गरिरहनुभो ।”
“कर्णाली प्रदेशमा कमरेड माधब नेपालले पार्टीको ह्वुप उलंघन गरी सांसदहरुलाई फ्लोर क्रस गरेर पार्टी निर्णय बिपरित मतदान गर्न लाउनुभो । यो कुन बिधीभित्र पर्छ ? ०७७ चैत्र २७ गते प्रधानमन्त्री बिस्वासको मत लिन जादाँ आफ्ना पक्षका सांसदलाई अनुपस्थित गराएर आफ्नो सरकार आफै ढाल्नुभो । यो कुन विधि भित्र पर्छ ? यता पार्टी एकताको लागि कार्यदल गठनको नाटक गर्ने, उता आफ्नो पार्टी को रास्ट्रीयसभाका आधिकारिक उम्मेदवार कमरेड बादलका विरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मतदान गरी पार्टीको उम्मेदवार हराउने । यो कुन बिधीभित्र पर्छ ?
०७८ बैशाख ७ मा म बिस्वासको मत लिदिन , अर्को सरकार गठनको लागि मार्ग प्रसस्त गर्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्दा राष्ट्रपतिले धारा पाँच बमोजिम नयाँ सरकारको लागि आह्वान गर्नुभो र त्यसमा माधब कमरेडले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भए नभएका सांसदहरुको कृत्य हस्ताक्षर गरेर सितलनिवास जानुभो । यो कुन बिधि भित्र पर्छ ? दलीय ब्यबस्थामा दलको सिफारिस पनि नचाहिने, स्वतन्त्र सांसद जस्तो जता मन लाग्यो त्यतै जे मन लाग्यो त्यही गर्न मिल्छ र ? यत्तिपनि उहाँलाई हेक्का नभएको हो वा उहाँले बसाल्न खोजेको विधि यहि हो ? कमरेड केपीलाई नितान्त एक्लो छोडेर अरु सबै अर्कातिर भएर गरेको उहाँहरुको अथक प्रयासलेपनि भ्यागुताको धार्नी पुर्याउन नसकेपछि अहिले उहाँहरु फेरि संसद पुनःस्थापना र नबगठित सरकारको खारेजीका लागि सर्बोच्च जानु भएको छ ! तर त्यहाँ पनि केही दाल गल्नेवाला छैन ।”
“कमरेड केपी माथी माधब झलनाथ कमरेडहरुले गरेको बिभेदकारी अराजनीतिक व्यबाहार सम्झिदा अहिले पनि मरो आँखा रसाउछ । यसरी आफुमाथी गरिएका पीडादायी, अपमानजनक र बिभेदकारी व्यबाहार लाई पनि सहजै पचाउदै कमरेड केपी ओली पार्टी देश र जनताको लागि अघि बढीरहनुभयो । सबैभन्दा अचम्मको कुरो त केछ भने केपी कमरेडले जीवनकाल भरी माधब कमरेडलाई निस्वार्थ सहयोग गर्दै आउनुभो भने बदलामा माधब कमरेडले सधैं केपी कमरेडलाई बिरोध र असहयोग मात्र गरिरहनुभो । यति सम्मकी केपी कमरेडले १५ वर्ष माधब कमरेडको नेतृत्व सफल पार्न लाग्नुभो, तर माधब कमरेडले सहयोग गर्न त सक्नुभएन नै आफुले चुनाब हारेर पनि केपी कमरेडको एक कार्यकाल अर्थात छ वर्ष कुर्न सक्ने पनि उहाँमा धर्यता रहेन ।
कमरेड प्रचण्डसंग मिलेर माहदिबेशन बाट निर्वाचित आफ्नो पार्टीको बैधानिक अध्यक्षलाई चौबाटोबाटै हटाएर आफुले हाताहाती अध्यक्ष लिनुभो । के उहाँको बिधि पद्धति यहि होला र ? अर्काको अपमान गर्नपाएपछी खिर खाएजस्तो मान्ने माधब कमरेडले आफू बिचार बिहिन र मुद्दा बिहिन भएपछि कुर्सी र सोफातिर ध्यान लाउन थाल्नुभो । पार्टीको बैठकमा केपी ओली सोफामा बस्यो, माथी मन्चमा बस्यो भनेर एउटा बिरामी प्रधानमन्त्री बसेको सोफा आफै गएर तानेर बेइज्जतिपुर्ण तरिकाले तल जार्नुभो तर १५ दिन नबित्दै आफुहरुको बिरोध कार्यक्रममा उहाँ सडकमै रातो सोफा ओछ्याएर बिराजमान हुनुभो ।”
“वतर्मान सरकारले इतिहासको कालखण्डमा सबैभन्दा धेरै उत्कृष्ट कामहरू गरेर इतिहास रचिरहेकोबेला, कोरोना माहामारीले देश आक्रान्त भैरहेको बेला आज सबै मिलेर सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्थ्यो। देश बिकासको लागी, सिमा सुरक्षा र रास्ट्रीयताको रक्षाको लागि , जनताको जिउधनको सुरक्षाको लागि कोभिड नियन्त्रणको लागि एजेन्डाहरु अघि सारेकोभए र सरकारले जनता र देशको पक्षमा यस्तो काम गरोस भनेर मुद्दा उठान गरेको भए आज हामी सबैजना माधब कमरेडलाइ वाह वाह माधब कमरेड भन्दै सहयोग गर्थ्यौ । तर आज देश र जनता भन्ने कुरा उहाँहरुले बिर्सी सक्नुभएको छ । त्यस सम्बन्धमा एउटा शब्दपनि उचारण गर्नुहुन्न। केबल ध्याउन्न भनेको केपी ओलीले ऐतिहासिक कामहरु गर्न थाल्यो, देश समृद्ध बनाउन थाल्यो, यस्को इतिहास रचिनेभयो त्यसैले एनिहाउ केपी हटाउ र सेर बहादुर लाई प्रधानमन्त्री बनाउ भन्ने एउटा मात्र मुद्दा आज उहाहरु संग बाकी छ। हासो उठ्ने कुरो हाम्रो ( एमालेको) बिधानमा अर्को कुनै बामपंथी पार्टी बाट कुनै सदस्य पार्टी प्रवेश गरेमा निजको पुर्बको पार्टीमा जुन स्ट्याटस थियो र सदस्यता जुन मितिको थियो यता पनि स्वही नै कायम रहने भन्ने ब्यबस्था छ ।
स्वही बैधानिक ब्यबस्था बमोजिम नै एमालेको बिचारलाई मन पराएर यस्तो अप्ठ्यारो प्रस्थितीमा माओबादी केन्द्रबाट साथ दिन आउनुभएका कमरेडहरु राम बहादुर थापा बादल, टोप बहादुर रायमाझी,लेखराज भट्ट लगायतका कमरेडहरुलाइ आज पार्टीमा स्थान दिइएको छ तर माधब कमरेडहरु उहाँहरुको उक्त जिम्मेवारी प्रती प्रस्न उठाउँदै हुनुहुन्छ । आफैले बनाएको बिधानको खिलापमा बोल्दै हुनुहुन्छ भने अर्कोतर्फ एमालेको एकता जोगाउन हामी सेर बहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउदैछौ भन्नुहुन्छ । हरे भग्वान कुरा सुन्दा हास्नु कि रुनु जस्तो हुन्छ। के उहाँले आत्मसात गरेको मार्कसवाद र जबज त्यही भन्छत ? एउटा बुर्जुवा पार्टीको नेतालाइ प्रधानमन्त्री बनाउदा आफ्नो पार्टीको एकता जोगिने? त्यस्कै लागि उहाँ यत्रो बर्ष कम्युनिस्ट भएर काम गर्नुभएको हो? समाजबादमा जाने बाटो त्यही होर ?